Isbeddellada Tooska ah ee Tooska ah iyo Istaatistikada | Martech Zone
Isbeddellada Tooska ah ee Tooska ah iyo Istaatistikada
Talaado, Agoosto 1, 2017 Douglas Karr
Mid ka mid ah mashaariicdeena sanadkan waa inaan dhisno a live-socodka miiska in our istuudiyaha Podcast. Waxaan dhab ahaan u adeegsan karnaa isla qalabka maqalka annagoo ku darna fiidiyowga. Qalabka fiidiyowga ayaa hoos ugu dhacaya qiime ahaan baakado badan ayaa bilaabaya inay ka soo baxaan shirkadaha fiidiyowga tooska ah loogu maareeyo istuudiyaha yar. Waxaan rajeyneynaa inaan helno ugu yaraan 3 kamarad iyo nidaam lagu maareeyo seddex meelood meel hoose iyo isdhexgalka fiidiyowga kombiyuutarada ama barnaamijyada shirarka.
Ansixinta hore waxay leedahay halista kharash badan iyo qalab si dhaqso leh u dhacay, laakiin faa'iidada ay leedahay korsashada saamiga suuqa. Waxaan rajaynayaa in aynaan sugin waqti dheer, laakiin in ku filan aan ka faa'iideysanno tikniyoolajiyadda cajiibka ah ee la soo saaray. Haddii aad waligaa rabto inaad raacdo qof khadka tooska ah oo khabiir ku ah teknolojiyadda tooska u socota, hubi inaad raacdo Joel comm. Wuxuu la wadaagayaa dhammaan wixii ugu dambeeyay uguna weynaa ee ku saabsan qalabka iyo qalabka.
Marka halkee ayaynu joognaa iyada oo si toos ah u socota maanta? Waxay ku qarxaysaa koritaanka waxaana laga yaabaa inay sii socoto wadada korsashada sida ay dad badan u maleeyeen. Waxaa jira shan ciyaartoy oo si toos ah u tabinaya live-ka oo ku jira berrinka marka la samaynayo xogtan, mid walbana leh faa'iidooyin kala duwan:
Live Facebook - In ka badan 360 milyan oo isticmaale ayaa daawada Facebook Live si joogto ah… laakiin maskaxda ku hay in Facebook uu si firfircoon u riixayo fiidiyoowga tooska ah, isagoo soo saaraya tiro aragtiyo ah laakiin waxaan su'aal ka qabaa tirakoobka hawlgalka qaarkood. Fiidiyowyada tooska ah ayaa la daawadaa saddex jeer ka dheer kan kale ee fiidiyoowga ah waxayna toos u oggolaadaan falcelinta iyo wadahadalka waqtiga dhabta ah oo ay weheliso awoodda dib loogu soo celin karo fiidiyowga goor dambe. Facebook sidoo kale wuxuu qorsheeyaa dadka isticmaala Khariidadda Tooska ah ee Facebook markaa waxaad ka heli kartaa durdurro-biyoodyo caan ah oo maxalli ah. Facebook Live hadda waxaa suurtagal ku ah moobilka, desktop, iyo bogagga.
Sheekooyinka Tooska ah ee Instagram - Qiyaastii 200 milyan oo isticmaaleyaal joogto ah ayaa daawada Instagram noolow Daawadayaashu waxay ku lug yeelan karaan waqtiga dhabta ah ee jecel iyo faallooyinka. Soo bandhigayaashu waxay dooran karaan inay ku dhejiyaan faallooyinka dhammaan daawadayaasha inay arkaan. Sheekooyinka Tooska ah waxaa laga heli karaa qaybta ugu sarreysa ee arjiga iyo sheekooyin cusub ayaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Top Live ah qaybta tabta sahaminta. Instagram wax yar ayey ka qaadatay Snapchat, waxay hoos u dhigtay koritaankooda 82% ka dib markii ay ku dayanayeen muuqaalada tooska ah ee Snapchat.
Youtube Toos ah - In kabadan hal bilyan oo qof ayaa isticmaala Youtube, ma aaminsani Youtube Toos ah waxaa loo arkaa a bulshada Meel-ku-socosho toos ah xilligan. Gelinta tooska ah waxaa loogu talagalay oo keliya kanaalada la xaqiijiyay oo moobiilka mobiilka ee ikhtiyaariga ah ayaa la heli karaa oo keliya marka aad haysato macaamiisha 1,000. Faallooyinka waqtiga-xaadirka ah ayaa la heli karaa oo Super Chat wuxuu siiyaa daawadayaasha hab ay ku muujiyaan faallooyinkooda inta ay socdaan. Dhacdooyinka Tooska ah ee Youtube waxay taageertaa kaamirooyin badan waxaana loo qorsheyn karaa inay suuq geyso.
dhifasho - dhifasho ayaa xukuma suuqa ciyaaraha halkaas oo 9.7 milyan oo isticmaale maalin kasta ay ku qaataan 106 daqiiqo daawashada durdurrada tooska ah maalin kasta celcelis ahaan. Faallooyinka waqtiga dhabta ah iyo astaamaha 'emoticons' ee laga heli karo daaqada wada hadalka. Isticmaalayaasha 'Twitch' waxay ka talaabsan karaan durdurrada kale marka kanaalkaagu ka baxsan yahay iyadoo la adeegsanayo Habka Martida. Bit Emoticons ayaa awood u leh in la iibsado sidaa darteed taageerayaashu waxay ku siin karaan tabarucaad dheeri ah qulquliyeyaasha.
nool.ly - 6 milyan guud ahaan isticmaaleyaasha ayaa u fiirsada waxyaabaha bil walba laga helo nool.ly., Barnaamij gacmeed moobilka ka socda.ly. Celcelis ahaan isticmaaleyaasha waxay ku qaataan seddex kulan maalintii barnaamijka, ama qiyaastii 3.5 daqiiqo maalintii. Astaamaha waxaa ka mid ah faallooyinka waqtiga-dhabta ah iyo "emoji-jecel". Xulashada martida waxay u oggolaaneysaa durdurrada tooska ah inay ku daraan taageerayaasha martida baahinta. Hadiyadaha farshaxan ee ay iibsadeen taageerayaasha iyo astaamaha ayaa ku dhejin kara faallooyinka isla markaana shaashadda sii dheereyn doonaan.
Kafiiri dhammaan faahfaahinta bogga Koeppel Direct, Kordhinta Live Live Live: Dib-u-qeexidda Ka-Qaybgalka Real-Waqtiga.
Tags: facebook liveinstagram toos ahsocodka noolaanshahahawlgelinta socodka livetirakoobka socodka tooska ahnool.lynoolemusical.lydhifashoyoutube live
10 Talaabo oo lagu dhisi karo Barnaamijka Tayeynta Bulshada ee Shaqaalaha U-doodista Bulshada
InsideView Shidaal Guul Go-to-Suuq leh Sirdoonka Bartilmaameedka